प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस् म्याकमा काम गरिरहेको छैन? हामी तपाईंलाई यो समाधान गर्न सिकाउँछौं म म्याकबाट हुँ
हाम्रो म्याकको अपरेटिंग प्रणाली सबैभन्दा स्थिर हो। यद्यपि त्यहाँ कुनै निर्बुद्धि प्रणाली छैन। थप रूपमा, यदि तपाइँ लगातार नयाँ संस्करणमा अद्यावधिक गर्नुहुन्छ, यो सम्भव छ कि यी सम्भावित प्रणाली असफलता स्वचालित रूपमा सुधार गरिनेछन् जब तपाईं त्रुटि समावेश भएको त्यो अंश पुन: स्थापना गर्नुहुन्छ।
केही साधारण असफलता मध्ये एक हो, तर त्यसले हामीलाई सताउँछ, यो हो प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस् प्रकार्यतसर्थ, कुनै पनि प्रयोगकर्ता अभ्यास, दैनिक यो समारोह प्रयोग गर्नुहोस्। यदि यो तपाईंलाई कुनै पनि अवसरमा असफल भएको छ भने हामी तपाईंलाई छिटो समाधान गर्ने तरिका देखाउनेछौं र दुई फरक तरीकाले, ताकि तपाइँ एक छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँको लागि सजिलो छ।
हामीले के गर्नु पर्छ यो सुविधा पुन: सुरुवात गर्नुहोस्, कि छ, यसलाई बन्द गर्न र फेरि खोल्न बाध्य। यो कार्यले लगभग सबै क्लिपबोर्डमा अडिएको वा अन्य समस्याहरू समाधान गर्दछ।
1 विकल्प १: गतिविधि मोनिटरको साथ।
2 दोस्रो विकल्प: टर्मिनल मार्फत।
विकल्प १: गतिविधि मोनिटरको साथ।
यस अवस्थामा, हामी गतिविधि मोनिटरमा जान्छौं, जुन अनुप्रयोगहरूको फोल्डर भित्र रहेको छ:
बाट अन्वेषक, निम्न मार्गमा: अनुप्रयोगहरू / उपयोगिताहरू, वा,
बाट रोशनी, को साथ पहुँच: कमाण्ड + स्पेसबार र गतिविधि मोनिटर लेख्ने।
एकचोटि खोल्नुभयो, माथिको दायाँपट्टि खोजी बाकसमा, हामीले लेख्नै पर्छ: बोर्ड
पबोर्ड विकल्प चयन गर्नुहोस् र X मा क्लिक गर्नुहोस् जुन माथिको बाँया पट्टि छ।
एक विकल्प देखा पर्नेछ, हामीलाई चेतावनी दिँदै यदि हामी प्रक्रिया रोक्न चाहन्छौं। हामी क्लिक गर्नेछौं "बल बाहिर निस्कनुहोस्"
अब हामी गर्न सक्छौं गतिविधि मोनिटर बन्द गर्नुहोस्।
प्रकार्य स्वत: बन्द हुन्छ र फेरि खोल्छ। यो प्रणाली रिबुट गर्ने जस्तै छ, तर त्यस प्रकार्यको मात्र। अब परीक्षण गर्नुहोस् यदि "प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस्" प्रकार्य ठीकसँग कार्य गर्दछ भने।
दोस्रो विकल्प: टर्मिनल मार्फत।
यो समय, हामी अघिल्लो विकल्पको पहिलो चरण दोहोर्‍याउछौं, तर यस पटक, हामी अनुप्रयोगहरू फोल्डरमा वा अनुप्रयोगका लागि स्पटलाइटमा हेर्दछौं: टर्मिनल
खुल्ला भएपछि, हामी लेख्छौं: किल्लबोर्ड।
अब हामी गर्न सक्छौं टर्मिनलबाट बाहिर निस्कनुहोस्।
या त यी दुई विकल्पले समस्या समाधान गर्नुपर्दछ। यदि होईन भने, रिस्टार्ट गर्नुहोस्।
यो सुविधा macOS उच्च सियराको लागि विशेष छैनत्यसकारण तपाईं यसलाई अभ्यासमा राख्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंसँग अघिल्लो म्याकोस छ भने।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » ट्यूटोरियलहरू » प्रतिलिपि गरेर टाँस्नुहोस् म्याकमा काम गरिरहेको छैन? हामी तपाईंलाई यो समाधान गर्न सिकाउँछौं
अन्तिम आरा अपडेट पछि, प्रतिलिपि / टाँस्न मेरो लागि काम गर्न रोकियो। तपाईंले उल्लेख गर्नु भएको दुई तरिकाहरू मैले प्रयास गरेको छु। तर यो मेरो लागि काम गर्दैन। मलाई थाहा छैन यदि तपाईलाई पछिल्लो अद्यावधिकको साथ काम गर्न बन्द गरेको कारण को बारे मा केहि थाहा छ भने। यदि त्यहाँ कुनै अन्य तरिका छ भने, म यसको मूल्यांकन गर्दछु।
या त दुई विकल्प मध्ये कुनैले पनि मेरो लागि काम गर्दैन
प्रतिलिपि गर्दै - टाँस्ने काम पनि मेरो लागि कार्य गर्दैन ... मैले लेखेको कुरा केहि प्रयास गरेको छैन र केहि पनि छैन, म यी दिनहरूमा कामको लागि प्रयोग गर्दछु दिनको लागि र तिनीहरूले मलाई धेरै समस्याहरू दिइरहेका छन् ....
बेलन फुर्टाडो भन्यो
नमस्कार, अन्तिम अपडेटबाट प्रतिलिपि र टाँस्ने आदेशहरू मेरो लागि पनि काम गर्दैन। के तपाईंले यसको लागि समाधान फेला पार्नुभयो?
Belén Furtado लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, उसले मलाई यी चरणहरू दिदैन, मैले धेरै पटक प्रयास गरें र केही पनि भएन ... सबै दिन मद्दत गर्दछ उहाँ मलाई वा केहि पनि हिर्काउन चाहनुहुन्न 🙁
Liset लाई जवाफ दिनुहोस्
जुआन कार्लोस विलालोबस भन्यो
कुनै! यसले काम गर्दैन।
जुआन कार्लोस Villalobos लाई जवाफ दिनुहोस्
कुल प्रतिभा! म बाहिर जबरजस्ती बाहिर र यो तुरुन्तै काम! धन्यवाद कुल
पृथ्वीको पिलरहरू, म्याक प्रयोगकर्ताहरूको लागि आउने अर्को खेल